Tora zvakare gwaro reIzwi kubva kuTemporary Mafaira
musha Products DataNumen Word Repair Tora zvakare gwaro reIzwi kubva kuTemporary Mafaira
kushandisa DataNumen Word Repair Kudzorera Izwi gwaro kubva kuTemporary Mafaira
Kana gwaro rako reIzwi (*. DOC kana * .DOCX faira) rikakuvadzwa kana kuora nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye haugone kudzosera data raunoda kubva kwariri. Zvino sezvo Microsoft Word ichagadzira temporary mafaera kana uchigadzirisa gwaro, zvichiri kugona kudzoreredza iyo data kubva kuIzwi temporary mafaera, ane DataNumen Word Repair.
Microsoft Knowledgebase inotsanangura iyo ruzivo rwakadzama nezve temporary mafaera ayo ichagadzira painogadzira gwaro. Saka kana dambudziko redata rikaitika, unogona kuteedzera ruzivo kuti uwane temporary mafaera anogona kunge aine data rinobatsira, wobva washandisa DataNumen Word Repair kuverenga uye kupora data kubva aya mafaera.
Iye zvino DataNumen Word Repair inotsigira kupora kubva .wbk temporary mafaera uye .asd AutoRecovery chengetedza mafaera.
Ye .wbk temporary mafaera, ruzivo rwakadzama runogona kuwanikwa pa pano. Kazhinji ichave inochengetwa mune inotevera dhairekitori:
C: Zvinyorwa uye Zvirongwa Kunyorera DhataMicrosoftWord (YeWindows XP)
C: Vashandisi AppDataRoamingMicrosoftWord (YeWindows 7)
Zve .asd temporary mafaera, ruzivo rwakadzama runogona kuwanikwa pa pano. Kazhinji ichave inochengetwa mune inotevera dhairekitori:
Kuti uite kupora, ndapota tevera matanho ari pazasi:
Cherechedza: Asati apora temporary Shoko faira ne DataNumen Word Repair, ndapota vhara Microsoft Word uye chero mamwe maapplication anogona kuwana iyo temporary faira.
Sarudza yakakuvara kana yakashata temporary Shoko .tmp kana .asd faira kuti igadziriswe.
Unogona kuisa iyo temporary Shoko .wbk kana .asd zita refaira zvakananga kana tinya iro bhatani uye sarudza maFaira ese (*.) serudzi rwefaira kutarisa uye kusarudza iyo faira.
By default, DataNumen Word Repair ichachengetedza iyo yakamisikidzwa Izwi refaira se xxxx_fixed.doc, uko xxxx ndiro zita rezvinobva Izwi .doc faira. Semuenzaniso, yesosi temporary Shoko faira iri ~ wrf0000.wbk, ipapo zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira ichava ~ wrf0000_fixed.doc. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Baya bhatani, uye DataNumen Word Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa iyo sosi temporary Shoko faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana sosi yetemporary Shoko faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
uye iwe unogona kuvhura iyo yakagadziriswa faira kuti uone iro rakadzorerwa gwaro. Zvinoenderana negwaro rakadzorerwa, unogona kuziva kana DataNumen Word Repair unogona kudzoreredza yako temporary Shoko faira rakabudirira uye tora zvaunoda. Nekudaro, iyo demo vhezheni haizochengetedze iyo yakamisikidzwa Izwi faira. Ndapota Raira iro rakazara vhezheni kutora faira.